Aqriso:Taariikh Madow Maalinta Jaceylka Aduunka #Valentine’s Day | Xaqiiqonews
Aqriso:Taariikh Madow Maalinta Jaceylka Aduunka #Valentine’s Day
14-ka feb Maalinta jaceylka aduunka Valentine’s Day ayaa ah waqti dad badan ay iskugu imaadaan dabaaldagyo, balse taarikhda soo jireenka ah ee maalintan ayaa ah mid madow, dhiig leh islamarkaana ah mid sumcad xun.
Inkastoo aysan jirin cid si dhab ah u xaqiijin karta halka ay ka soo jeedo maalinkan wadamada qaar ay galaan fasaxa, hase ahaatee waxaa loo tiiriyaa Romaankii Hore iyadoo ragga ay garaaci jireen dumarka si xoog ah.
Romans-kii Duur jooga ahaa islamarkaana Waalnaa
13 feb ilaa 15 Feb Romans-kii hore ayaa u dabaal dagi jiray ciidooda Lupercalia ragga ayaa gowrici jiray ari iyo eeyo, halka dumarkana ay xiran jireen maqaarka xaywaanaadka la gowracay isla waqtigaasi.
Romaansiyiintii romanka waxa ay ahaayeen kuwa “Sarqaasan” oo hadana “Qaawan” sidaasi waxaa yiri Noel Lenski, oo bara ka ah jaamacadda Colorado gaar ahaan kuliyadda taariikhda .
Gabadha yar waxa ay dooran jirtay ninkii garaaci lahaa, tani waxa ay ka aaminsanaayeen in ay tahay waxa u suurtageliya dumarka in ay dhali karaan.
Hadaba romans-kii hore ayaa mas,uul ka ah magaca maalinta dadka qaar u dabaal dagaan ee Valentine’s Day, waxaana la sheegaa in Imbaraadoorkii lagu magacaabi jiray Claudius-kii labaad uu xukun dil ah ku fuliyey labo nin oo mid ka mid ah lagu magaacabi jiray Valentine- 14-kii feberaayo, hadaba kaniisada Catholic oo sharfeysa ninka ladilay, ayaa maalinkaasi ka dhigtay ciid iyagoo ugu magac daray Valentine’s Day.
dhanka kale waxaa jiro sheeko kale oo iyadana tilmaameysa in Ramonkii ay u dabaaldagi jireen maalin lagu magacaabo Galatin’s Day, oo macnaheedu tahay “Maalinta jaceylka dumarka” waxaana sida la sheegay dadka ay isku qaseen maalmaha Galatin’s Day iyo Valentine’s Day madaama ay isku dhawaaq yihiin.
Si kastaba ha ku baxdee dad badan ayaa maanta u badaal degga maalinkani Valentine’s Day, waa maalin christiank-ka agtooda ku weyn, balse diimaha Islaamka iyo Urdu-ka ayaa labadaba mamnuucya in loo badaal deggo ciidan.